Electric Water nfuli, Igwu Pool mgbapụta, DC Pool mgbapụta - Jade
6 mere i kwesịrị Họrọ Jade
Elekwasị anya na-edo gị ọdọ mmiri na ndụ gị
Ebe ọ bụ na 1986, China na-eduga moto emeputa. Jade mepụtara igwu mmiri mgbapụta ya elu moto technology na meriwo a aha ọma n'ụwa nile na-adịbeghị anya 5 afọ.
ETL, CETL, OA, RoHS, CEC certifications wdg All mmiri ịmụta ruru eru ihe. 100% mma ego na inogide ule ọ bụla ngwaahịa tupu Mbupu.
Large ọnụ ọgụgụ mmepụta na amacha ọrụ belata na-eri nke ukwuu, Jade ọkọnọ na ngwaahịa na kasị asọmpi price-eme ka ị na-kasị asọmpi na-ere ákwà na mpaghara gị.
Short ebute Oge
Ọtụtụ nnukwu kpọmkwem akpaka igwe aka iji ọsọ iwu na obere oge. Anyị nwere ike nwere gị ngwa ngwa iwu njikere na dị nnọọ 1 izu.
User Enyi na Enyi Products
Zie ezie ngwaahịa imewe-edu ndú ka mfe echichi na mmezi, aka ibelata alaghachi mere site siri na-arụ ọrụ.
Top sales na nkà mee ka ị dịghị mgbe na-eche ike ikwurịta okwu a factory, niile Jade mkpara ga-ada site gị, zaghachi gị ase na dozie nsogbu gị, n'agbanyeghị tupu ahịa ma ọ bụ mgbe-ahịa.
20 "(500mm) Aja Iyo na mgbapụta System
Automatic Pool Cover mgbapụta
8 Series Super Flow mgbapụta
Agbanwe Speed ​​mgbapụta
Olu nke ndị ahịa anyị
M ahuta Jade dị ka otu n'ime anyị ọzọ suppliers ikpeazụ afọ ole na ole nanị ebe obere ikpe iwu. O yiri ha na ngwaahịa na-mma iji na-agụ anyị ahịa, m na-ahụ obere alaghachi si ahịa anyị. Ọtụtụ n'ime ...
Howard Clancy, A nkesa na Australia
Jade osobo anyị mkpa anyị zuru okè. Ha na-enwe ike enye anyị ahaziri na agba na anya maka nfuli na nzacha ọ bụ ezie na anyị na-adịghị ịzụta ihe ọ bụla iji. Adị m ka m kpọrọ a otutu ụlọ ọrụ.
William King, A ọdọ mmiri na-ewu & mainta ...
ọ bụ oké na-arụ ọrụ na Jade, m na-karịsịa ha masịrị magburu onwe mgbe-ire ọrụ! Anyị nwere nsogbu na-abịa ha Motors na ahịa anyị 'mbụ mmiri n'akụkụ na jụrụ maka enyemaka. Amaghị m na-eche na ...
Liberato Guzman, A nkesa na USA
Chọta Jade na Canton Fair 2014